Radio Don Bosco - Tsy mba Andriamanitry ny maty Izy...
Tsy mba Andriamanitry ny maty Izy...
Naseho ny : 21 novambra 2020
Sabotsy 21 nôvambra 2020 — Herinandro faha-33 mandavantaona — Evanjely Masina nosoratan'i Masindahy Lioka 20, 27-40 — Ny teninao, ry Tompo, dia fanahy sy fiainana ; Ianao no manana ny teny mahavelona mandrakizay.
Azo lazaina hoe antoko mpanohitra an'i Kristy raha ny Sadoseanina no tenenina satria hita miharihary izao ny tsy fankatoavany an'i Kristy raha resaka fitsanganan-ko velona no tenenina, ary fanontaniana bontolo be fotsiny izao no ataony. Dia nataon'i Jesoa tsy nanan-kalahatra tokoa izy ireo eto satria mazava ho azy fa ny fitsanganan-ko velona dia fiainana ao amin'Andriamanitra, fa tsy azo arahina ara-bakiteny fotsiny izao, eny fa na dia eo aza ilay vavaka manao hoe : "Ety an-tany tahaka ny any an-danitra". Ny fanatanterahana ny sitrapon'Andriamanitra no atomboka ety an-any fa ny fombafomba maha olombelona kosa tsy hita intsony rehefa any an-danitra, sady mazava ny tenin'i Kristy hoe : "Tsy Andriamanitry ny maty Izy fa an'ny velona".
Koa sao misy alaim-panahy tahaka ireto Sadoseanina ireto koa isika hanohitra befahatany fotsiny an'i Kristy noho ny zava-misy hitan'ny maso. Ny Jody, indrindra ny Farisianina, tamin'ny andron'i Kristy dia nihevitra fa ny fitsangana-ko velona dia tohin'ny fiainana eto an-tany, ka mbola misy ny mpampakatra sy ny ampakarina ; ho an'i Kristy anefa dia misy fiovana satria fiainana ao amin'Andriamanitra izany ka tsy misy mpampakatra sy ampakarina intsony. Ny finoana sy ny fhatokisana an'Andriamanitra no ahatakarana izany. Andriamanitra no manome antsika ny fiainana. Izy no miantso antsika hiara-tsambatra Aminy indray andro any. Mila ezaka avy amintsika anefa izany.